Fikononkononana hanangana “Fanjakana gasy”: naiditra am-ponja i Pety, nahazo LP Rainidina | NewsMada
Par Taratra sur 18/10/2018
Niakatra fampanoavana tetsy Anosy ny mpitarika ny Hetsika ho amin’ny fanorenana ifotony (HFI) Rakotoniaina Pety. Nalefa naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora ny tenany taorian’izany raha nahazo fahafahana vonjimaika kosa Rainidina. Anisan’ny vesatra niampangana azy ny fanohintohinana ny filaminam-panjakana.
Tsy afa-bela. Mialokaloka ny am-ponja indray aloha izany ity ben’ny Tanànan’i Fianarantsoa teo aloha ity. Nosamborina, afakomaly, tany amin’ny manodidina an’i “Camp Robin” lalam-pirenena fahafito (RN7), anelanelan’Ambositra sy Ambohimahasoa ny tenany. Nentina niakatra aty Antananarivo ary nentina teo amin’ny fampanoavana, omaly hariva ka izao naiditra am-ponja vonjimaika izao (MD).
Fanjakana kely anaty fanjakana
Tsy azo ihodivirana fa resaka firaisana tendro amin’ny fananganana “Fanjakana gasy”, mitondra ny firenena ho an’ny fampisaraham-bazana sy ny maha iray tsy mivaky an’i Madagasikara ary koa ny fametrahana “Fanjakana kely anaty fanjakana” ny anton’izao MD ho an’ny mpanorina ny Tambatra izao. Nisy ifandraisany amin’ny hetsika notarihin-d dRajoharison Rainidina, mpitarika ny Rodoben’ny Malagasy Tia Tanindrazana (RMTF), hanangana “fanjakana gasy” tetsy Antaninarenina, ny alahady teo, izany. Nosamborina sy nananaovana famotorana tetsy amin’ny Toby Ratsimandrava koa izy, nanomboka ny alahady teo ary nahazo fahafahana vonjimaika (LP) araka ny fanapahan-kevitry ny fampanoavana, nandray ny raharaha, omaly. Hiakatra fitsarana ny 12 novambra ho avy izao.
Tsiahivina fa efa naiditra am-ponja fony fitondrana Ravalomanana Rakotoniaina Pety. Navoakan’ny fitondrana Tetezamita tany am-ponja taty aoriana. Teo anelanelan’izany, nisy fanodinkodinam-bolam-panjakana teny anivon’ny kaominina, fony izy ben’ny Tanàna, naha voarohirohy azy.
Tsy naharesy lahatra vahoaka tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey
Niara-dia amin’ny HFI ary anisan’ny tompon-kevitra amin’ny fanarenana ifotony ny tenany, niaraka amin’ireo mpanao politika maromaro. Nivoy izany teny amin’ny kianjan’ny 13 mey, nandritra ny andro vitsy, saingy tsy naharesy lahatra ny olona izany. Nirava maina taty aoriana.
Araka izany, andrasana indray ny ho tohin’ny raharaha rehefa hiakatra fitsarana izy mirahalahy ireto.